၈၈၈၈ မှ သည် ​တောက်ပသော အနာဂတ် များဆီသို့ | ဒီရေ
၈၈၈၈ မှ သည် ​တောက်ပသော အနာဂတ် များဆီသို့
ဒို့ ဗမာပြည်မှာရှိနေတယ်..ယနေ့ ထိတိုင်။
ဒို့ မြန်မာပြည်..ကိုလိုနီကလွတ်မြောက်ခဲ့ ပြီးနောက်.
အနှစ် ၂၆ စံစား..ကိုရွှေဆိုရှယ်လစ်များက..
ဇောင်ချမ်းကွဲ တွေ ရေပေါ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်...
ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့သေနတ်..
ဒို့ ပြည်သူ့ ကိုပြန်သတ်..
ကျမတို့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားမောင်စစ်တပ်..
နေခြည်မှာရွှေရည်လောင်းစေဖို့ ..ညသန်းခေါင်ကိုဒို့ ဖြတ်ဖူးရမယ်.
၈၈၈၈ တွင်ကျဆုံးသော..အာဇာနည်များကိုအလေးပြု၍ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေရန်..တသက်လုံး ပြုပြုခဲ့ သမျှ..မသဒ္ဓါ၏ ကောင်းမှုအဖို့ ဘာဂ..တို့ ကို.ဤနေရာမှအမျှပေးဝေလိုက်ပါသည်။